Isikhathi soshintsho olukhulu kanye nokuguqulwa okukhulu: sayina isicelo: Martin Vrijland
Isikhathi soshintsho olukhulu kanye nokuguqulwa okukhulu: sayina isicelo
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ku-12 May 2020	• 22 Amazwana
Inkinga ye-corona isiphoqa ukuthi sicabange ngezinguquko ezinkulu. Ngivele ngiyimemezele ngemuva kokuthi iwebhusayithi yami ihlaselwe i-DDoS isigamu sosuku. Ngenze isitatimende esingaqondakali ukuthi: "Icebo lami ukwethula izinhlelo zokhonkolo maduze nje zokuhlehlisa nokwehlisa lo hulumeni kanye nalo lonke uhlelo."
Ngisebenze kulelocebo isikhathi eside futhi ngaliveza kwabaningi ngemuva kwezigcawu. Kungumcebo ophathelene nentando yeningi eqondile, ngohlelo lokuvota oluku-inthanethi olutholakala ngobuchwepheshe be-blockchain.
Yebo, kukhona izingozi kwezobuchwepheshe, kepha ingozi enkulu kunazo zonke ilele ephiramidi lamandla. Leyo hlelo idinga ukuguqulwa futhi iguqulwe. Lokhu kungenzeka kuphela uma ihlelwe kahle. Amandla akufanele aye endaweni ephakathi nendawo, kepha amandla kufanele aye kubantu.
Sizokwenza ngendlela ehlukile!
Uhluke ngokuphelele! Futhi usizo lwakho luyadingeka. Imibuzo embalwa kuqala:
Ngabe ufuna ukuthi wena noma izingane zakho nihlala ejele ledijithali?
Ngabe ufuna ukuthi wena noma izingane zakho niphoqelelwe emgomeni eningazi ukuthi uqukethe ini ngaphandle kwalokho “ochwepheshe” abakutshela kona?
Ngabe ufuna ukusunduzelwa ohlelweni lwamakhomanisi ancike kuhulumeni lapho konke kubhekelwe khona ngeBig Big?
Cha? Manje isikhathi sokushintsha uhlelo njengoba sazi! Isikhathi sezwe esikhululekile esinentando yeningi eqondile: indlela entsha yokuphila ndawonye. Isikhathi sokuqeda ikhabethe le-pupp kanye nomqhele.
Intando yeningi yamanga
Uhlelo oludala lususelwa kwinqubo yentando yeningi yama-sham, lapho bonke onodoli bamaqembu ezepolitiki kubukeka sengathi baqeqeshelwe ukusebenza umqhele kuphela futhi banikeze abantu inkohliso yokuzikhethela.
Banikeza ukukhetha okufanela lelo qembu kuyo yonke imibono nakho konke ukunambitheka emphakathini kanye nenkulumompikiswano ngokubonakala okuphikisana ukuvikela amandla afanayo ne-ajenda ngemuva kwezigcawu.
Ukuphikiswa, kwesobunxele, kwesokudla, kwenkululeko, konke kufunga ukuthi bazothembeka kumqhele kanye nezingxoxo ezishubile kwabezindaba, izingxoxo ngesikhathi sokhetho; zilapho kuphela zokwenza abantu bakholelwe ukuthi izwi labo liyezwakala.
Intando yeningi njengoba sazi ngayo impilo yethu yonke. Siphila eqoqweni elihlanganisiwe, ubumpumputhe obuhlangene.
Kholwa ukuthi kungenziwa ngendlela ehlukile
Ngoba siphila ohlelweni lwezenhlalo kusukela sisebancane, asazi kangcono. Yisimo sethu esinamathela kuso.
"Sifuna nje uhulumeni bese intando yeningi iyindlela enhle kunazo zonke. Uma kuhlelwe ngokwaphezulu, izivumelwano ziyafana, futhi lokho kusebenza ”, sicabanga.
"Ngemuva kwalokho wonke umuntu usebenzisa i-asphalt efanayo, sinezithuthi zomphakathi ezinhle, intela ihlelwe kahle futhi sinolwazi oluhle kuzo zonke izimpilo zethu."
Kwabanye, umbusi wembatha ngempela
Abanye abantu ababoni ngempela ukuthi umbusi akazigqoki izingubo. Bakholelwa ngokuqinile ohlelweni njengoba silazi futhi abaningi bathembele futhi basithanda ngokuphelele.
Kungaleso sikhathi senhlupheko ye-corona lapho abanye beqala ukubona ukuthi kancane kancane sisebenzela ohlelweni lobukhomanisi lobuchwepheshe. Abanye bazokubona lokhu njengento edingeka kwangaphambili; inqubekelaphambili engasekelwa ukuvikela ubhubhane lwesikhathi esizayo futhi ilondoloze imvelo.
Kodwa ingabe lokho kudinga ukuthi inani labantu libekwe kuwebhu yokulawulwa kwezobuchwepheshe noma iningi lezinkinga zomhlaba liwumphumela wabantu abacebile abalambele amandla abenze imali ngemithi, uwoyela, ukukhiqizwa ngobuningi nokunye?
Umqhele, indlu yethu yobukhosi
Indlu yethu yasebukhosini idlale indima enhle kulokhu. Bakweleta amandla abo nemali eyinhloko ngokuyikhishwa ezintweni ezingavuthiwe nakwafutha. Ngemuva kwalokho asikhulumi ngezinto zobumnyama kusukela kudala.
Futhi osopolitiki bafunga ukuthi bazithobe kubani? Kuya 'umqhele'. Bafunga ukuthi bazothembeka emgqonyeni wamandla osayina yonke imithetho nokuthi amajaji, izikhulu, abameli kanye namaphoyisa afunga ukuthobela umthetho. Abafungesi ukuthembeka kubantu, kodwa kuya komqhele.
Lowo mqhele ubusa "ngomusa kaNkulunkulu". Akekho ongakhombisa ukuthi lomusa kaNkulunkulu futhi amandla awukhala lwekhala.
Kuhlelo lokukholwa lapho wonke umuntu emphakathini enesimo, ngoba abazali nogogo nomkhulu, umndeni nabangane: Wonke umuntu unesimo samanga afanayo ngakho-ke akazi okungcono.
Singaqhubeka nokuthembela ohlelweni olukhona, oluqhubeka ngokugxila kakhulu ekutheni singazethemba yini ukuthi uma sizithathela umthwalo wemfanelo, singazihlela izinto kahle. Ngeke silahle yonke imithombo yobuchwepheshe esijwayele ukusetshenzelwa ngasikhathi sinye, ngeke sonke siphile ngokungazelele ngaphandle kwengqalasizinda nenhlangano. Noma kunjalo, singabuyisela emuva imigqa yayo yokuphatha kanye nokwenza izinqumo.
Uhulumeni kumele abe nabamele bangempela babantu abafunga ukuthi bangathembeki emqheleni, kodwa kubuntu. Ubuntu kumele bube nezwi eliqondile ezinqumweni. Uyakholelwa yini ukuthi lokho akwenzeki, ngoba abantu abaningi banolwazi oluncane kakhulu lwezinto eziningi ezahlukahlukene? Ingxabano enhle leyo, kepha mhlawumbe izinto eziningi zidinga ukwenziwa lula.
Uma abantu bengafuni ukukhuphuka kwesilinganiso, khona-ke ngeke kube khona ukwanda kwesilinganiso. Uma abantu becabanga ukuthi imidiya iqala ukubukeka njengokwanda kwenkulumo-ze, kufanele iguqulwe ibheke phansi. Uma abantu bengafuni ukubalwa, ngeke kube khona ukubalwa kwabantu. Futhi nokunye, njalonjalo.
Kepha konke kuqala ngokubuyisa imigqa yamandla. Kumele bahambele abantu esikhundleni sokuya komqhele. Kufanele bagijimele kumuntu; ebuntwini. Ababusi abakhethwe ngqo ngabantu kumele bakhethwe ngamavoti aqondile futhi bafunge ukuthi bazothembisa abantu. Futhi wonke amajaji, izisebenzi zikahulumeni, amaphoyisa, amasosha, abameli, njll. Bonke kumele bafunge ukuthembeka kubantu futhi konke kungachithwa yiningi.
Intando yeningi eqondile ingenziwa ngobuchwepheshe. Ubuchwepheshe beBlockchain bangaqinisekisa ukuthi ungavumela izwi labantu likhulume kabi futhi lingonakalisiwe. Akuyona yini imibono eyinqaba leyo? Ingabe kukhona ongakusekela ngalokhu? Lapho uzwa ukuthi u-Elon Musk uyayithanda, ingabe uzwakalisa izindlebe zakho ngokuzumayo?
Ukuvota kusuka 'efwini'
Noma ngubani ofuna ukuvota angabamba iqhaza kwinqubo yokwenza izinqumo maqondana nokuvunywa kwemithetho nemithetho, futhi anosuku lokuphelelwa yisikhathi. Ukuvota kwenziwa ngekhompyutha noma ngocingo okuxhumeke kuhlobo lokukhonjwa. Okokuqala, kufanele sicabange kabusha lonke uhlu lwemithetho esekhona: 'kungenzeka ihlale' noma 'kufanele ihambe'. Yebo, ukwenza lula kanye nokwenza lula esikhundleni sokuxakaxaka kobuboya banamuhla.
Ama-Pro kanye nama-con's
Lokhu futhi kusho ukuthi kufanele sinamathisele ama-multinationals amakhulu ohlelweni oluqhathanisayo. Ngemuva kwakho konke, kufanele sifune ukuqeda amandla abantu abanjengoBill Gates. Ukuguqulwa kwamandla okufanayo okufanayo kungenzeka futhi lapho.
Kulula ukufaka uhlu lwama-con's. Empeleni kufanele sinciphise ubuchwepheshe nedatha enkulu futhi leyo yindlela esingasondla ngayo leso simiso.
Akuyena yini u-Elon Musk okunguye ofuna ukufaka ingqondo yethu efwini futhi ayixhume ku-AI. Ngabe amasango akwaBill awazange afake isicelo sikapen 2020-060606 ukwenza ubuchopho bethu njengebhlokhi ku-blockchain? Yebo, kepha singakuvota lokho. Singahlehlisa ubuchwepheshe futhi sidinge abathuthukisi be-AI ukuthi bangayinikezi i-AI mahhala.
Abaningi bangakuthola kunzima ukubeka yonke imithetho noma izinqumo phambi kwabantu. Lapho-ke abantu bazoba nomsebenzi wosuku kuzo zonke lezo zinqumo bagcine bengasenandaba. Kodwa-ke, futhi kungasho ukuthi abaqondisi bayabaluleka noma bahlulelwe ukwenza kube lula futhi kube lula ukukhulumisana esikhundleni sokuxhumana ngoboya manje esetshenziselwa thina kusuka kubo. Ngakho-ke kufanele balethe umsebenzi olula futhi ocacile ngakho-ke sidinga izinhlobo ezihlukile zabashayeli.
Okubukeka kungekuhle kufanele kuholele oguqukweni oluhle: umthethonqubo uya kusuka ngobuningi uye kwikhwalithi.
Okuhle ukuthi singabeka amabhuleki ekulinganiseni nasekubalulekweni bese sisuka ebukhoneni besiya lula. Okunye ukuvela ukuthi sithola abamele abantu bangempela esikhundleni sabantu abamelele ngasese imali enkulu kanye nomqhele. Ukumelwa kwabantu kumele kuphinde kube yilokho okushiwo yangempela kwalelo gama.
Yindlela owenza ngayo
Siqala ngokwenqaba uhlelo olungahambisani noMthethosisekelo esikulo manje. Ukungafezeki kusho ukuthi kuphambana namalungelo ayisisekelo esintu.
Umthethosisekelo usayinwa umqhele, futhi nemithetho nayo isayinwe umqhele. Ekuhluphekeni kwe-corona, sikubonile ukuthi ohulumeni bavame ukungawunaki umthethosisekelo futhi basheshe benze imithetho emisha edlula kumthethosisekelo. Sidinga ukubuyela emuva kumgomo wamalungelo ayisisekelo hhayi umgomo wemithetho. Ngokusekelwa kulelo lungelo eliyisisekelo, wonke umuntu unamalungelo alinganayo. Kungakho intando yeningi eqondile iyikhambi.
Isinyathelo 1 Ngakho-ke uhlelo oludala olususelwa umqhele futhi lwenqaba ukubonakala kwentando yeningi. Lokho kusho ukuthatha isikhundla sokuthi igunya esicabanga ukuthi likhona alikho emthethweni. Awukho umusa kaNkulunkulu futhi kufanele kube nokufunga okuthembekile kubantu.
Lokhu kusho ukuthi singasenqaba isijeziso, ukuphatha nezinhlawulo ngesikhundla:
“Akekho umuntu onegunya phezu kwami ​​ngoba izimiso nemithetho imakwe umqhele. Lowo mqhele ususelwa emseni kaNkulunkulu. Zonke izikhungo ezifana nezinkantolo, abaphathi bezentela, abahloli, njll., Bafunga ukuthi bazothembisa umqhele. Bonke abahluleli, osopolitiki, amabutho, amaphoyisa nokunye ngokufunga kulo mqhele. Abanalo igunya phezu kwethu. "
Ngakho-ke isinyathelo sokuqala ukwenqaba noma iliphi igunya, ukwenqaba inhlawulo nezinhlawulo nokwenqaba isikweletu sentela. Kufanele silahle uhlelo oludala.
Uma uza enkantolo, ungakhombisa umahluleli ukuthi ufunga ukuthobeka kumqhele (ngomusa kaNkulunkulu) ngakho-ke awunagunya phezu kwakho. Ungakhomba emthethweni odonswa umqhele (umusa kaNkulunkulu). Ukhululekile ukuhamba.
Sakha uhlelo olusha, ngokukhishwa kwesicelo esisayinwe ngabantu abaningi ngangokunokwenzeka lapha esizeni. Lowo mbhalo uthunyelwa kuhulumeni ongasebenzi kanye nomqhele futhi uthi kumele bashiye phansi izintambo.
Simisa ukubukela i-TV, silalele abezindaba nabezepolitiki, futhi siyabona ukuthi imidiya yezenhlalo nayo iyithuluzi ezandleni zabaphethe.
Siyawenqaba amandla ohulumeni basekhaya, ohulumeni bezwe neBrussels bese siqala ukusuka ekuqaleni.
ONgqongqoshe bangaqhubeka nokuba khona futhi badinga kuphela ukushicilela umbiko ngokuphathwa kwabo ngokwezezimali. Abaholi balezi zingqongqoshe kufanele bafunge ukuthi bazothembeka kubantu futhi ngokushesha baqale ukubuyekeza izindlela nemithetho evimbela inkululeko.
UMnyango Wezezimali kumele ukhombise lapho kuthathwa inkinobho esembizeni yentela nokuthi mangaki amacala owatholile.
Lawo macala kufanele anqatshwe bese kusethwa ku-zero. Sishintshela ngokushesha kwi-bitcoin futhi sidedele i-euro nedola. Amandla nethonya le-European Central Bank namanye amabhange nawo kumele kuphele. Baphrinta imali ngokungeyikho nokuthi uhlelo lwezezimali olubi lubhuntshile.
"Isikweletu sikazwelonke kumele senqatshwe ngokushesha bese sibekwa zero."
Abantu banikezwa ithuba lokuvula i-akhawunti ye-bitcoin ngeviki eli-1 futhi uMnyango Wezimali ngokushesha ubeka wonke umuntu ngenani le-1 bitcoin.
I-Bitcoin ihlinzeka ngembobo. Ayisekho imali ye-fiat, kepha imali embozwe entsha, lapho i-bitcoin iyiyona "standardgolide" entsha.
Wonke umuntu uthola imali eyisisekelo. Lokhu kufana nohlelo lwamakhomanisi manje olusetshenziswa ohulumeni, kepha ngenxa yokuthi umugqa wamandla ugijimela kubantu futhi uqonde nentando yeningi usunguliwe, ubungozi bohulumeni wobumbano buncishisiwe.
Abathengisi nezinkampani banikezwa inyanga yokufaka isistimu evumela ukukhokhwa kwe-bitcoin, kepha masinyane wamukele ukuthengiselana okuqondile njengendlela yokukhokha.
UMnyango Wezangaphakathi unikezwa inyanga eyodwa yokusungula uhlelo lokuvota oluqondile, oluvumela umphakathi ukuthi ulethe imithetho kubantu yokwenqatshwa noma ukubukezwa.
I-DigiD isetshenziselwa ukuvota, kepha okunye ukufakwa kwamakhompyutha ngokuqashelwa kobuso noma isitifiketi sokugoma esidijithali kungavunywa ngumphakathi kuphela.
Yonke imithetho ekhona vele ayivumelekile. Sizofaka isigaba sokuphuma kwesikhathi. Abagqugquzeli, amajaji, amabutho, amaphoyisa kanye nabezamajaji bayeka ngokushesha imisebenzi yabo.
UMnyango Wezangaphakathi kufanele futhi wethule uhlelo lokuvota phakathi kwabantu abangakapheli inyanga, lapho abantu bengaphakamisa abameli babo ngokushesha.
Kuzoba nommeli oyedwa okhethiwe ngenkonzo ngayinye nokuthi lowo omele akhethwe angakhethwa ngamavoti amaningi ohlelweni lokuvota.
Abaholi abasha kufanele baqale ngokushesha babike masonto onke kubantu ngokuxhumana okuqondile ku-YouTube noma kweminye imithombo yezokuxhumana.
Ngokushesha benza ukubuka phezulu kwenani lemithetho futhi baqinisekise ukuthi inani lamanje le-tangle nenani lemithetho liyachithwa futhi kufingqiwe ngenani elingaphezulu kwamashumi amahlanu ngenkonzo ngayinye.
Imithetho emisha eyisisekelo yethulwa kubantu 'njengemithetho yomphakathi' emisha ngomthetho kanye nesifingqo samagama ayi-1000.
Abantu bangavuma, banqabe noma babuyise le 'mithetho yomphakathi' ngohlelo lokuvota lwe-blockchain ukuze lubukezwe.
Abezindaba kumele bayeke ngokushesha ukusakaza izindaba nezinhlelo zezingxoxo. Kufanele kube nesikhathi esiphelele semidiya kuze kube yilapho abamele abantu abasha bebuyekeza lonke uhlelo.
Ngakho-ke kumele babhekisise lonke uhlelo lwezindaba nawo wonke amaphephandaba, futhi baqinisekise ukuthi abantu basebenzela wona esikhundleni se-oda elidala elisunguliwe.
* umbhalo waphansi
Ukuvala isikweletu sentela kungokwesikhashana. Kuyinto yokumiswa. Avelaphi onke amashumi ezigidigidi zabantu abavela kubo bonke labo abasiza ukusiza umphakathi ngesikhathi senhlekelele yamakhorali? Leyo mali ishicilelwe ndawo. Lonke uhlelo lwezezimali lususelwa emalini ye-fiat (ayimboziwe ngalutho oluprintiwe ngokomzimba nangaphansi).
Vele, ukuthopha isikweletu sentela akuyona okokugcina. Kungokwesikhashana, kuze kube yilapho abamele abantu abasha (abamele abantu ngempela) bemi ezikhundleni futhi lonke uhlelo lingahlanzwa futhi lusethwe kabusha.
Ukuphela kwentela ngakho-ke ngeke kube okokugcina, kepha uhlelo ludinga ukuhlanzwa lusuka ezigidini ezigobhozela e-EU ziye ngase-ECB.
Sizokusebenzisa kanjani lokho? Lokho kuqala ngesicelo esicacile, lapho ungaziveza khona ukuthi ufuna ukuba ushintsho. Singakhuluma ngokwazi nokuphaphama, kepha ukuphela koshintsho kuvela esenzweni. Funda amaphuzu asuka kuhlu lwezikhalazo lapha abese evota. Ngokubambisana kuphela lapho singenza ushintsho futhi ukuthi konke kuqala ngemizamo yethu.
Ngalesi sikhalazo siyamemezela:
Ukuthi umqhele awunamandla
Ukuthi uhulumeni kufanele abeke phansi imisebenzi yakhe ngokushesha
Ukuthi yonke imithetho nemithethonqubo ayivumeleki ngokushesha futhi kubuyekezwe
Ukuthi konke ukuphoqelelwa kumiswa ngokushesha
Ukuqoqwa kwentela kumiswa ngokushesha
Ukuthi inhlawulo ayisebenzi futhi amaqoqo amisiwe
Ukuthi amaphoyisa, abehluleli, amabutho, amajaji, abagqugquzeli, abahloli kanye nabo bonke abasebenzi bakahulumeni kufanele bafunge ukuthi bazithobe kubantu
Ukuthi isikweletu sikazwelonke asivumelekile
Ukuthi izimangalo zezikweletu ze-ECB nabanye abakweletwayo azilungile
Ukuthi kuzoba nentando yeningi eqondile (efana kuchazwe lapha)
Ngalesi sicelo sicela:
Ukuqedwa kwamanje kwemisebenzi yenkosi, indlovukazi, amalungu amagumbi okuqala nawesibili namalungu ekhabhinethi
Ukuthuthukiswa okuqondile - kanye nokulethwa kungakapheli inyanga eyi-1 yohlelo lokuvota lwabavoti nguMnyango wezeziMali, lapho kungaqokwa abamele abakhethiweyo (abamele ummeli ngamunye ngenkonzo eyodwa, ukuqokwa bavotelwe ngohlelo lokuvota)
Ukuthi uMnyango Wezimali ubeka inani elithile le-1 bitcoin ngaphakathi kweNetherlands kungakapheli isonto elilodwa
Ukuqulwa komphakathi komqhele nosopolitiki ngohlelo lokuvota lwe-blockchain, kufaka phakathi ubukhulu kanye nokuqukethwe komusho
Ngakho-ke iya kuwebhusayithi entsha manje, usayine isicelo futhi / noma ube yilungu:
ukuqondisa intando yeningi manje
IKhabhinethi yenkululeko yentando yeningi kaRutte III ayisekho
Ividiyo kaDkt Plandemic U-Judy Mikovits luhlobo lwe-Izinkundla 201 lwezindaba eziyisimanga (ividiyo)
Amathegi: blockchain, ubunzima be-corona, umqhele, intando yeningi, ngqo, afakiwe, inkonzo, izikhonzi, isikhalazo, zezombusazwe, ezombusazwe, uvote, ubuchwepheshe, shintsha
12 May 2020 ku-21: 57
Ngikubona lokhu njengomqondo wokuthi umgomo wokugcina unwetshiwe, hhayi into ezosetshenziswa ngokushesha. Chaos kuqinisekisiwe, uma wenza lokhu. Misa izintela? Masheshe ubeke izisebenzi zomphakathi eziyisigidi ngaphandle komsebenzi, amaphrojekthi amaningi asetshenziswa amakhulu ezinkulungwane zabantu azofika ekumeni, indiza enkulu yemali izoqala (ngaphandle kokuthi umhlaba wonke uhlanganyele ngasikhathi sinye), njll.
Ukushintsha kwesinyathelo-nesinyathelo-ke kubukeka kimi kuphumelela. Kumele uqale uguqule ngokuphelele ukunikezwa kwemininingwane, okuyi-media. Uma abantu kufanele banqume kuyo yonke into, kufanele uqiniseke ukuthi bathola indaba eqotho mayelana nezinzuzo nezithelo zesinqumo ngasinye. Kepha ngiyesaba ngokweqiniso imvelo yomuntu, ehluke kakhulu kuzo zonke izinhlobo zezinguquko, futhi i-emo sensitive. Ngakho-ke ungaqiniseka ukuthi uma, ngokwesibonelo, umgwaqo omusha kufanele wakhiwe kwenye indawo, futhi bathola abantu phambi kwekhamera abakhala ngokuthi lo mgwaqo useduze nezindlu zabo, noma ngesihlahla sehlathi, abangama-90 kwabangu-100 abantu bazovota NGESIKHATHI.
Futhi kuzoba njalo ngamaphrojekthi amaningi, ngicabanga. Nginovalo lokuthi-ke hhayi okuningi okuzophinda kube semhlabathini futhi, futhi ekugcineni nizogcina niba nohlelo lwamakhomanisi olufana ncamashi neSoviet Union, oluxhaswe ubuchwepheshe obuthuthukisiwe. Angicabangi ukuthi lowo ngumhlaba ongcono kakhulu ukuhlala kuwo.
Ngicabanga, njengawe, ukuthi uhlelo lwamanje lube nesikhathi salo esihle, futhi luye lwaphazanyiswa yinkohlakalo, ukubandlululana nazo zonke izinhlobo zamaqembu okuphekela anikezwe amandla amakhulu kakhulu. I-Royal Family kwesinye isikhathi iyindawo eseyiphelelwe yisikhathi (yize leyo wmb ingahlala ihlala njengohlobo 'lwenkonzo' ye-Netherlands-Promotion noma i-Folklore noma okuthile, kepha ihluthwe wonke amandla). Ngakho-ke kufanele kwehluke, kepha kusabalale lokho cishe eminyakeni eyi-10 noma engaphezulu, engicabanga ukuthi kushesha kakhulu, uma kunikwa iziphithiphithi ezinkulu okufanele zenzeke. Umuntu, abantu, kumele akwazi ukubhekana nalokho ngokwengqondo.
12 May 2020 ku-22: 40
Ukucaca: Isikweletu sentela sesikhashana.
Avelaphi onke amashumi ezigidigidi zabantu abavela kubo bonke labo abasiza ukusiza umphakathi ngesikhathi senhlekelele yamakhorali?
Leyo mali ishicilelwe ndawo. Lonke uhlelo lwezezimali lususelwa emalini ye-fiat (ayimbozwe lutho olushicilelwe ngokomzimba nangaphansi)
Vele, ukuthopha isikweletu sentela akuyona okokugcina. Kungakho futhi ithi 'kumisiwe'. Kungokwesikhashana, kuze kube yilapho abamele abantu abasha (abamele abantu ngempela) bemi ezikhundleni futhi lonke uhlelo lingahlanzwa futhi lusethwe kabusha.
Ukuphela kwesikweletu sentela ngakho-ke ngeke kube okokugcina, kepha kuzodingeka ukuthi kuhlanzwe kusuka kumabhiliyoni amakhulu okugeleza okuya e-EU nase-ECB.
Cabanga ngakho futhi.
12 May 2020 ku-22: 53
Ukuchazwa okuhle ngemali ye-fiat (ukubamba ihlaya kancane)
12 May 2020 ku-22: 58
Futhi lokhu kusenzima
12 May 2020 ku-23: 06
Futhi, uma ngikhuluma iqiniso, angikholelwa ekuguqukeni kwesinyathelo-nesinyathelo. Konke kungenziwa ngobukhulu futhi kufanele kwenziwe ngokushesha okukhulu. Into ebalulekile kulokhu ukuthi izintambo zamandla kufanele ziguqulwe kusuka phezulu kuya phansi. Abantu kumele babe nezwi eliqondile futhi uhlelo kumele luphinyiswe kakhulu. Ukwenza lula kungukhiye.
13 May 2020 ku-00: 59
Martin, uma ngiqonda kahle uchaza isakhiwo esilinganayo esimisa umthethosisekelo okhona ngokuthi "egameni Labantu". Lokhu-ke kusho ukuphela kobukhosi bumthethosisekelo, obumelwa yilokho okubizwa ngePhalamende “ngentando yeningi”. Ngakho-ke iRiphabhulikhi…
Hhayi-ke bengilokhu ngicabanga ukuthi kwakuyisistimu eyinqaba egcwele ukuphikisana. Ngesikhathi kuqhubeka amakilasi eSocial Study eGymnasium, othisha babehlale baphendula umbuzo olula "Kungenzeka kanjani ukuthi kube nentando yeningi uma izikhulu (zikahulumeni) zifunga ukuthi ziyavuma ukuthola umqhele?" Lapho ngingavele ngakhangela khona iwayala .. okuncane kushintshile kulokhu.
12 May 2020 ku-23: 35
Izinkampani futhi kuzofanele zibambe iqhaza ekuguqukeni okunjalo futhi ikakhulukazi emkhakheni wezezimali. Lapha futhi singaphindela ohlelweni lapho ama-depiler nabahlinzeki bezinqubomgomo bengabanikazi. Ukuvota kuma- bonon, inqubomgomo yomholo kanye nezinye izindaba ezibalulekile kungenziwa nge-blockchain. Ngemuva kwalokho, eminye imikhakha ingaguqulwa. Enye yezinkinga ezikhona zesikhathi samanje iqiniso lokuthi amazwe amakhulu anquma inqubomgomo kahulumeni. Ngicabanga ukuthi lokhu kufanele kuxazululwe kusinyathelo 1.
12 May 2020 ku-23: 54
Isixazululo sakho siyikhambi elihle nobuchwepheshe bamanje. Kodwa ngiyazibuza ukuthi ngabe le nkathi yezobuchwepheshe izohlala isikhathi eside kangakanani. Sesivele sabona kusengaphambili okwaziwa kusengaphambili. Umkhathi uzoqinisekisa ukuthi konke sehlelwa kabusha. Abasathane baka-Elon bazoyeka ukusebenza, i-inthanethi izokwehla, abantu kuzofanela babuyela kwizisekelo. I-Egoism ngeke isinde ngezinga eliphakeme.
Sesivele sisezingeni lapho sisazi khona isimo. Sisola abanye kepha siyazikhokhela thina. Sonke sinezinhlelo zokusebenza ze-Microsoft kumakhompyutha ethu. Sonke sikhokha izintela ezikhokhela uWilly, Rutte kanye nezimpi.
Kumele sivume ukuthi sinecala futhi siqhamuke nezisombululo ezinjengawe ukuthi singazilungisa kanjani izinto thina ngokwethu.
Uqinisile, kukithi. Inhloso yobukhona bethu ukuthola ukusebenza kwethu. Jabula futhi ubonge wena kanye nomphefumlo wakho futhi uvumele umphefumulo wakho ubuse i-ego yakho.
Uma ungazihlole, omunye umuntu uzokukwenza!
14 May 2020 ku-00: 57
empeleni kunezibonelo ezimbalwa lapho amafa amasu asevele enquma ukuguquguquka kwe-analog ngokungezelela noma okufana nokufakwa endaweni yedijithali.
13 May 2020 ku-09: 20
Ngeke ngikwazi ukusiza kepha ngiyavuma
kepha sizothatha bani.
Abahambi ngokuzithandela futhi nephepha le-A4 eligcwele izikhalazo?
Squires Crown sika kumele kuqala bazi, maye, yebo
uma kungenjalo izinguquko nje?
13 May 2020 ku-09: 30
Into ethokozisayo ukuthi abantu bangathanda uguquko, kodwa abakholwa ukuthi nathi kufanele sibe yinguquko thina uqobo.
Ungakugcizelela lokhu ngokusungula imodeli yentando yeningi eqondile. Lokho kusho ukuthi kufanele uziphathe.
Siyakhala futhi sithi abenzi lutho kwiThe Hague. Sikhononda ngamazwana anjengokuthi: "Aphi amaqembu aphikisayo!"
Ukuphela koshintsho lwangempela olungafika futhi okufanele luvele ngokuzivuselela ngokwakho. Lokho kuphenduka kube igxathu elikude kwabaningi.
Sifuna ukufunda okubi mayelana nokuvalwa, okubi ngemijovo nokubi ngeBill Gates, kepha ukwenza wena ngokuzumayo kuyisinyathelo esisekude kakhulu.
13 May 2020 ku-09: 47
Kubalulekile ukuqonda umthetho oyisisekelo wemali evikelwe. Unemali ongavikelekile ephrintiwe engenamkhawulo futhi engavundulwanga (njengoba kwenzeka ngaleso sikhathi sosizi) futhi ngenxa yalokho ibangela i-hyperinflation (ebizwa nangokuthi 'imali ye-fiat') noma unemali exhunywe kunsizakalo, efana negolide noma uwoyela. Izinga likawoyela le-OPEC selokhu lehla, amanani entengo kawoyela aba mancane. Izinga legolide lakhululwa eminyakeni edlule. I-Bitcoin ibukeka iyindinganiso entsha.
Nakulokhu futhi kukhona ingozi yokufakwa kwedijithali, ukuhlangana ne-AI, kepha kwinqubo ebonakala sengathi cishe ayikwazi ukuyeka, ungaguqula iphiramidi yamandla.
Nansi incazelo yokuthi “indinganiso yegolide” enjalo isebenza kanjani:
13 May 2020 ku-09: 57
"Imali yeFiat" noma i- "fiduciary imali" yimali engatholi inani layo kokuqukethwe okwenziwe ngalo (inani eliyingqayizivele njengokuthi ngezinhlamvu zemali zegolide nezesiliva), kepha ngokuzethemba ukuthi ingasetshenziswa ukuthenga izimpahla nezinsizakalo. Inani elisetshenziswayo ngakho-ke alinqunyelwe kusisindo esithile nokuqukethwe kwensimbi eyigugu, kodwa kwithemba lokuthi opharetha bezomnotho abalibeka kunani lwemali.
Kulesi sikhathi senkinga yamakhorali, imali ye-fiat isincipha ngokushesha. Leso yisimo esingalawuleki.
13 May 2020 ku-11: 29
Kukhona ukuxhumana okuqondile phakathi kwemali namandla. Ngaphandle kwamasosha ase-US nekhono lokunquma izimpi, leli dola belingasho lutho. Futhi-ke nokuvuma kwebutho laseMelika, amasotsha, ukugcina ubumbano lwaseMelika ngamadola.
13 May 2020 ku-10: 09
Bheka phansi ngakwesokudla ukuthi kuthengiswe kangaki igolide, isiliva ne-crypto (ephepheni). Lokhu kusho ukuthi, ngokwesibonelo, abantu abayi-173 bathi i-1 oz yesiliva, abayi-172 bathenga umoya. Inani elifanelekile lesiliva e-US yi- $ 2615, inani elifanele ledola ngu- 👻
Bass Ruigrok wabhala:
13 May 2020 ku-12: 36
I-National Socialism idale uhlelo lwezezimali lwamahhala olwaqeda isikweletu somphakathi futhi sabekela eceleni osomabhizinisi….
Ngakho-ke amanga angapheli mayelana ne-National Socialist Germany.
Cabanga ukuthi iyakuba yini intukuthelo lapho abantu bebona ukuthi uhlelo oluhle kakhulu lubhujisiwe yilabo okuthiwa yizisulu.
Ngaphezulu nangaphansi, okuhle kubi, umenzi wobubi uyisisulu.
Into efanayo uGhadaffi noSaddam Hussein bazame ukuyenza ...
13 May 2020 ku-16: 22
Isiqephu esihle sikaMartin.
Umbuzo uwukuthi, ngaphezu kwakho konke, ukuthi uzowathola kanjani amaphoyisa nezempi. Kufanele ukuthole nalokhu. Angikaze ngiqonde ukuthi kungani ungabulala umuntu njengesosha. Empini ongasazi isizathu sangempela saleya mpi. Ngama-oda nangaphansi kokuzenzisa kwamanga kwe.
Ngisakwazi ukuvumelana namaphoyisa, kodwa noma ngabe abaphathi bakho bengakutsheli ukuthi uthathe imiboniso. Mina kunoma yiliphi izwe.
Ngaphezu kwalokho, ebengikucabanga, futhi futhi ukwazile. UJensen nje freemason. Ngakho-ke 1 kubo, ngiyibukela kumnandi ngenkathi idla. Kepha lowo mfo akaguquki ngempela endabeni yakhe. Vele uhlale uzwela ngoTrump.
Lapho-ke indaba yalokho okusho ukuthi isitayela akusavumeli igama layo ekuphendukeni kwabantu. Futhi ukuthi kufanele ubhale uJansen noma uJensen ukhona yena unama-33. Lokho kuqediwe, futhi futhi kuyisiwula nje. UJensen kuthiwa uvinjiwe yi-GS. Kepha nikeza uJensen 33 njengesibonelo. Futhi uthatha izindimbane eziningi ogibeni. Futhi ividiyo esusiwe enokubukwa okungaba ngu-180.000, funda inombolo ye-Masonic 9. Futhi konke lokho kwenziwayo kwezandla akusizi ngalutho. Scary boy so Etc njll. Ubukhali futhi ubonakala ngokushesha kuwe.
16 May 2020 ku-09: 22
bangabeka lowomusa kaNkulunkulu endaweni lapho ilanga lingakhanyi. Ihlala inkundla yemidlalo yabantu abangazi ..
16 May 2020 ku-23: 14
NjengaseNdlovukazi yamisa iPhalamende laseBrithani ngo-Agasti 2019, elalithengiswa abezindaba njengoBoris Johson ocele imvume endlovukazi. Kodwa-ke, kumthethosisekelo waseBrithani, inkosi (yamakhosi) (amandla) igcinile amandla lapho inkosi ilulekwa ngumkhandlu wangasese.
17 May 2020 ku-13: 23
"Umthetho ojwayelekile" osuselwa kubantu abajwayelekile (ama-motherfuckers), indlovukazi ingaphezulu komthetho futhi idd ilawula i-Commonwealth (Canada, Australia, NZ njll). Njengoba uMadurodam eseyinkosi nje yomthethosisekelo enephalamende (likhulumela i-groin) yeshashalazi.
16 May 2020 ku-14: 44
18 May 2020 ku-13: 49
I-movie enhle futhi ecishe ifike inhliziyo. I-heroine ecishe imemezele ngokoqobo lokho obekuyiwebhusayithi iminyaka. Cishe ngokoqobo, ngoba kubuye kudinga "amandla aphezulu" okuguqula.
Le ntokazi ingaba nezinhloso ezinhle kakhulu, kodwa ngeshwa ukukhuluma kwayo okungokomzwelo ngeke kushintshe lutho esikhungweni lapho enikeze khona le nkulumo.
Njengoba uMartin echaza, ushintsho lwangempela luvela ngaphakathi. Uma inkulumo yale ntokazi iphuma kuye uqobo, khona-ke ilungile ekuqinisekisweni kongqongqoshe ngaphakathi kohlelo olusha oluchazwe ngenhla 🙂
« Ividiyo kaDkt Plandemic U-Judy Mikovits luhlobo lwe-Izinkundla 201 lwezindaba eziyisimanga (ividiyo)
Ukwehla okukhulu kwemali ngesikhathi senhlekelele ye-corona kuholela ekuphikiseni: ingabe i-bitcoin isisombululo? »
Ukuvakasha okuphelele: 2.523.789
Marcos op ICorona Crisis Covid-19 ikhumbuza uBart Gates ka-2003
Usongo lwebhomu op ICorona Crisis Covid-19 ikhumbuza uBart Gates ka-2003
Ikhamera ye-2 op Amandla wenguquko aqala ngokuchitheka kovalo, izinhlelo nezinkohliso zamanga bese ephenduka inguquko eyiqiniso